Ventricular Tachycardia (နှလုံးသွေးလွှတ်ခန်း နှလုံးခုန်မြန်ခြင်း) - Hello Sayarwon
Ventricular Tachycardia (နှလုံးသွေးလွှတ်ခန်း နှလုံးခုန်မြန်ခြင်း) ကဘာလဲ။
သာမန်ထက်နှလုံးခုန်မြန်နေခြင်းဖြစ်စေတဲ့ ပြင်းထန်တဲ့အခြေအနေဖြစ်ပါတယ်။ ခန္ဓါကိုယ်တစ်ခုလုံနဲပအဆုတ်အတွက် သွေးတွေကို နှလုံးညှစ်နေစဉ်အတွင်း ထောက်ပံ့ပေးပြီး နှလုံးကိုယ်တိုင်အတွက်ကို နှလုံးမညှစ်ဘဲနားနေချိန်အတွင်း နှလုံးထောက်ပံ့သွေးကြောတွေကနေတစ်ဆင့် ထောက်ပံ့ပေးဖို့အတွက
သာမန်မှာ နှလုံးခုန်နှုန်းက တစ်မိနစ်မှာ၆၀-၈၀လောက် ခုန်ပါတယ်။ နှလုံးသွေးလွှတ်ခန်းနှလုံးခုန်မြန်ခြင်းမျာတော့ နှလုံးခုန်သံဟာအရမ်းများသွားပြီး တစ်မိနစ်မှာအကြိမ်၁၀၀ထက်ပိုများသွားပြီး နှလုံးခုန်စက်ဝန်းတစ်ခါလည်တိုင်းမှာ ပုံမှန်မဟုတ်တဲ့နှလုံးခုန်သံအနည်းဆုံး ၃ကြိမ်ပါနေပါတယ်။ နှလုံးခုန်မြန်ခြင်း၊ မူမမှန်ခြင်းရင်တလှပ်လှပ်ခုန်ခြင်းကို ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။ နောက်ဆက်တွဲရလဒ်တွေမဖြစ်အောင်ကာကွယ်ဖို့ အရေးပေါ်ကုသမှုရဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။
Ventricular Tachycardia (နှလုံးသွေးလွှတ်ခန်း နှလုံးခုန်မြန်ခြင်း) က ဘယ်လောက်အဖြစ်များသလဲ
နှလုံးရောဂါဖြစ်နေတဲ့လူနာတွေမှာ ပိုပြီးဖြစ်လေ့ရှိပါတယ်။ ရောဂါဖြစ်ပွားနိုင်တဲ့အချက်အလက်တွေကို လျှော့ချခြင်းအားဖြင့် စီမံနိုင်ပါတယ်။ အချက်အလက်များထပ်မံသိရှိဖို့အတွက် ဆရာဝန်နဲ့ တိုင်ပင်ဆွေးနွေးသင့်ပါတယ်။
Ventricular Tachycardia (နှလုံးသွေးလွှတ်ခန်း နှလုံးခုန်မြန်ခြင်း) ရဲ့လက္ခဏာတွေကဘာတွေလဲ
စက္ကန့်အနည်းငယ်လောက်သာ နှလုံးခုန်မြန်တာဆိုရင် စိုးရိမ်စရာမလိုပါဘူး။ အချိန်ကြာကြာမြန်ခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ သင်ကိုယ်တိုင်နှလုံးခုန်မြန်နေတာ၊ နှလုံးခုန်သံကျယ်နေတာ ဒါမှမဟုတ် နလုံးခုန်သံကျော်သွားပျေက်သွားတာမျိုး သတိထားမိနိုင်ပါတယ်။ ဒီလိုမျိုးနှလုံးခုန်သံအပြောင်းအလဲကို ရင်တုန်ခြင်းလို့ခေါ်ပါတယ်။
နှလုံးသွေးလွှတ်ခန်း နှလုံးခုန်မြန်ခြင်း ရဲ့ အဖြစ်အများဆုံးရောဂါလက္ခဏာတွေကတော့
ရင်တုန်ခြင်း- နှလုံးခုန်သံမြန်လွန်းခြင်းဒါမှမဟုတ် ပုံမှန်မဟုတ်ခြင်းကို သတိထားမိခြင်း
ရင်ဘတ်အောင့်ခြင်း၊ ရင်ဘတ်ဖိထားခံရသလို တင်းကျပ်ကျပ်ဖြစ်ခြင်း
သွေးခုန်နှုန်းအားနည်းခြင်း ဒါမှမဟုတ် စမ်းမရြခ်ငး
Ventricular Tachycardia (နှလုံးသွေးလွှတ်ခန်း နှလုံးခုန်မြန်ခြင်း) ကိုဘာတွေကဖြစ်စေသလဲ
ဘာကြောင့်ဖြစ်ရတယ်ဆိုတာ တစ်ခါတစ်လေမှာ မပြောနိုင်ပါဘူး။ အထူးသဖြင့် ငယ်ရွယ်သူတွေမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အများစုမှာတော့ အောက်ပါအခြေအနေတွေကြောင့် ဖြစ်ရပါတယ်။
သွေးအတွင်း ဓါတုပစ္စည်းများ များလွန်းခြ်ငး၊ နည်းလွန်းခြင်း
Ventricular Tachycardia (နှလုံးသွေးလွှတ်ခန်း နှလုံးခုန်မြန်ခြင်း) ဖြစ်နိုင်ခြေကိုဘာတွေက မြင့်တက်စေသလဲ
နှလုံးသွေးလွှတ်ခန်း နှလုံးခုန်မြန်ခြင်း ဖြစ်ပွားနိုင်ချေကိုမြင့်စေတဲ့အကြောင်းရင်းတွေ အများကြီးရှိပါတယ်။ ဥပမာအားဖြင့်
မိသားစုထဲတွင် နှလုံးသွေးလွှတ်ခန်း နှလုံးခုန်မြန်ခြင်း ရာဇဝင်ရှိဖူးခြင်း
Ventricular Tachycardia (နှလုံးသွေးလွှတ်ခန်း နှလုံးခုန်မြန်ခြင်း) ကို ဘယ်လိုအတည်ပြုပါသလဲ
ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာစမ်သပ်မှုတွေနဲ့ စစ်ဆေးမှုတွေဆောင်ရွက်ဖြင်းဖြင့် ဆရာဝန်က အဖြေရှာအတည်ပြုပေးပါလိမ့်မယ်။ စမးသပ်မှုပြုနေစဉ်အတွင်း ဆရာဝန်က နှလုံးခုန်သံကိုနားထောင်ပြီး သင့်လက္ခဏာတွေကို မေးပါလိမ့်မယ်။ နှလုံးသွေးလွှတ်ခန်း နှလုံးခုန်မြန်ခြင်းကို သံသယရှိနေမယ်ဆိုရင် ဆရာဝန်ကအခြားစစ်ဆေးမှုတွေ ပြုလုပ်ခိုင်းပါလိမ့်မယ်။ နောက်ထပ်လုပ်ရမှာတွေကတော့
အစာရေမျိုပြွန်ကိုဖြတ်ပြီး အယ်ထရာဆောင်းအသုံးပြု နှလုံးစစ်ဆေးခြင်း
Ventricular Tachycardia (နှလုံးသွေးလွှတ်ခန်း နှလုံးခုန်မြန်ခြင်း) ကို ဘယ်လိုကုသပါသလဲ
ခန္ဓါကိုယ်အတွင်း စက်ထည့်ခြင်း၊ နှလုံးခုန်ပုံမှန်ဖြစ်စေဖို့ကူညီပေးနိုင်တဲ့ လျှပ်စစ်စီးကြေင်းအပျော့စားကိုအသုံးပြုခြင်း
နှလုံးခုန်သံကိုထိန်းချုပ်ပေးဖို့ လျှပ်စစ်လှုံ့ဆော်မှုပေးတဲ့ စက်ထည့်ခြင်း
ပုံမှန်မဟုတ်တဲ့ လျှပ်စစ်လှုံ့ဆော်မှုတွေကို ပေးတဲ့ နှလုံးအစိတ်အပိုင်းတစ်ချို့ကို အပူ သို့အအေးအသုံးပြု ဖျက်ဆီးပစ်ခြင်း
နှလုံးအတွင်း ပုံမှန်မဟုတ်တဲ့လျှပ်စစ်လှုံ့ဆော်မှုများကို ပိတ်ဆို့ပေးနိုင်ဖို့ နှလုံးအတွင်းအမာရွတ်ဖန်တီးခြင်း
လူနေမှုပုံစံပြောင်းလဲခြင်းနဲ့ အိမ်သုံးကုထုံးတွေအသုံးပြုခြင်းက နှလုံးသွေးလွှတ်ခန်း နှလုံးခုန်မြန်ခြင်း ကို ကုသရာမှာ ဘယ်လိုအထောက်အကူပြုနိုင်မလဲ။
နှလုံးရောဂါရှိခြင်းကြောင့် နှလုံးသွေးလွှတ်ခန်း နှလုံးခုန်မြန်ခြင်းဖြစ်နိုင်ချေ ပိုများပါတယ်။ ဖြစ်နိုင်ချေများစေတဲ့အကြောင်းတွေအများကြီးရှိပေမယ့် ကာကွယ်လို့ရနိုင်ပါတယ်။
နှလုံးကျန်းမာစေတဲ့အရာတွေကို ပြုလုပ်ခြင်းဖြင့် နှလုံးရောဂါကို ကာကွယ်ပေးနိင်ပါတယ်။
ကျန်းမာရေးနဲ့ညီညွှတ်စွာစားခြင်း- ိအသီးအနှံဟင်းသီးဟင်းရွက်များများစားခြင်း၊ အဆီနည်းတဲ့နို့ထွက်ပစ္စည်းများများစားခြင်း၊ အသားနဲ့အဆီများလျှော့စားခြင်း
သီတင်းပတ်အတွင်း ရက်အများစုကို လမ်းလျှောက်ခြင်း၊ ကိုယ်လက်လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ခြင်းဖြင့် ကုန်ဆုံးစေခြင်း
Ventricular tachycardia. http://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/ventricular-tachycardia/home/ovc-20253531.
Ventricular Tachycardia. http://www.healthline.com/health/ventricular-tachycardia#Overview1.
Ventricular Tachycardia – Topic Overview. http://www.webmd.com/heart-disease/tc/ventricular-tachycardia-topic-overview.